E-Journal: October 2009
The things must be throw out.
တစ်ခါတစ်လေမှာ ဆူဆူညံညံလေးတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတတ်တယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ မသိတာအတော်များများကို အဘိဓာန်ဖွင့်လိုက်တာပါ။ သဘောကျတာကတော့ ဆိုထားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ သံစဉ်လေးကိုပါပဲ။
မင်းအတွက် ဘာတွေက အနှောင့်အယှက်ဆိုတာကိုရော သိရဲ့လား။
ဟုတ်ပြီလေ။ ဒါတွေကဘာလည်းလို့ မင်းသိချင်မှာပါပဲ။
မင်းအတွက် အနှောင့်အယှက်တွေဆိုတာကိုရော တွေးကြည့်မိရဲ့လား။
မင်းအတွက် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတာတွေကရော ရန်သူတွေပဲလား။
ကဲ-ထားတော့။ အန္တရာယ်၊ အနှောင့်အယှက်နဲ့ ရန်သူဆိုတာဘာတွေလည်းလို့ မင်းသိချင်နေမှာပါပဲလေ။
ရက်စက်မှုဆိုတာ အင်အားပဲ။ အဲဒီ့အင်အားက သူတို့ကိုတွန်းလှန်ဖို့ပေါ့။ ဟုတ်တယ်၊ ရက်စက်မှုကို အင်အားအဖြစ်ပြောင်းလဲရမယ်။ မိန်းမကျင့် မိန်းမကြံဆိုတာကို ကျင့်သုံးပေါ့။ ဓမ္မတေးသီဆိုနေသူတွေလည်း ချီတက်ကြမှာပဲ။ အစဉ်အလာအဖြစ်နဲ့ လိုက်နာနေရတာတွေကိုလည်း ဆန့်ကျင်ရမယ်လေ။ ရုပ်ပြကြီးတွေကို စွန့်ပစ်ထားရမယ်။ အဓိကအချက်ကတော့ ပြောပြောဆိုဆိုလုပ်နေသူတွေရဲ့ကွန်ယက်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ရမယ်။
ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းက အန္တရာယ်၊ အနှောင့်အယှက်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ရန်သူပဲ။ မင်းရဲ့ အရေးကြီးလိုအပ်ချက်တွေကို စွန့်ပစ်ထားလိုက်။ ဒါမှလည်း မင်းအတွင်းစိတ်ရဲ့ လိုလားမှုတွေကို ဖော်ထုတ်နိုင်မယ်လေ။
မင်းအတွက် အန္တရာယ်၊ အနှောင့်အယှက်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ရန်သူဆိုတာကို သိပြီလား။
သွေးထွက်လောက်အောင် အရှုံးပေးရပြီဆိုရင်ပဲ မလိုလားမှုတွေအပေါ် ဆန့်ကျင်မှုဆိုတာ မြင့်တက်လာတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်းမျက်လုံးတွေကိုတော့ အလိမ်အညာတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်မထားစေနဲ့ပေါ့။
ဒီကနေစရေတွက်သွား ဘယ်တော့မှအဆုံးမရှိတော့တဲ့အထိ ရက်စက်မှုဆိုတာ အင်အားပဲ။
ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းက အန္တရာယ်၊ အနှောင့်အယှက်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ရန်သူပဲ။
ကဲ - ဒီတော့ အပြောင်းအလဲလုပ်တာပေါ့။
မှတ်ချက်။…..။ GreenDay ရဲ့ Know your Enemy ကို ခံစားကြည့်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 8:52 PM4comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် သုခမိန်, ဝေမျှခြင်း သီချင်းများ
အောက်ဆုံးမှ သန်း ၁၀၀၀ (တစ်နည်း စူပါကာက သန်း ၁၀၀၀)တို့ မှီတင်းနေထိုင်ရာ နိုင်ငံများမှာ ၂၁ ရာစုကို ဖြတ်သန်းနေရသော်လည်း၊ သူတို့တစ်တွေ၏ အရပ်ရပ်ရေချိန်မှာ ၁၄ ရာစုအဆင့်တွင်သာ တန့်ရပ်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
..... ဤသို့ ဘာ့ကြောင့် နောက်ကျ ကျန်ရစ်ရသည်ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရာ၊ “ဆင်းရဲမှုထောင်ချောက်” (poverty trap)ထဲ ပိတ်မိနေသောကြောင့်ဟု အဖြေထုတ်သည်။
ကျမ်းရှင်၊ ပါမောက္ခ ကို(လ)လီယာ၏အလိုအရ၊ အဆိုပါနိုင်ငံများ ပိတ်မိနေသော ဆင်းရဲမှုထောင်ချောက်တွင် လက္ခဏာ ၄ ပါးရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံများဖြစ်နေခြင်း (being landlocked)
သယံဇာတပေါကြွယ်ဝခြင်း (abundant natural resources)
အုပ်ချုပ်မှုဆိုးဝါးညံ့ဖျင်းခြင်း (bad governmace) နှင့်
ပြည်တွင်းစစ် (civil wars) တို့ဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏာတစ်ခုချင်းစီကိုလည်း သူက ရှင်းပြသည်။
ပထမလက္ခဏာကို ရှင်းပြရာတွင် ပထဝီအရ ကုန်းတွင်းပိတ်ဖြစ်တိုင်း ပြဿနာရှိသည်မဟုတ်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကပါ ဆင်းရဲပြီး ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့် သီးခြားကင်းလွတ်နေသည်ကသာ တကယ့်ပြဿနာဟုဆိုသည်။
သယံဇာတပေါကြွယ်မှုမှာ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သဘာဝပေးလက်ဆောင်ဟု ဆိုနိုင်သည့်တိုင် လက်တွေ့တွင်ဤသို့မဖြစ်။ နိုင်ငံရေးအီလစ်များကြား အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်၊ အုပ်စုတိုက်ပွဲ (တစ်နည်း သယံဇာတလုပွဲ)များအတွက်သာ ရေခံမြေခံဖြစ်နေသည်။ ဤအနေအထားကို တတိယလက္ခဏာ (အုပ်ချုပ်မှု ဆိုးဝါးညံ့ဖျင်းခြင်း)က အားဖြည့်လျက်ရှိရာ၊ ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်သည်ပင် ကျိန်စာတစ်ခုလို ဖြစ်လာရတော့သည်။ ဤသည်ကို နောက်ပိုင်းပညာရှင်များက “သယံဇာတကျိန်စာ”(resource curse) ဟု ခေါ်သည်။
ဆိုခဲ့ပါလက္ခဏာသုံးပါးကို ပို၍သည်းသန်ပြင်းထန်စေပြီး၊ နောက်ဆုံး တွင်းမည်းကြီးထဲသို့ ဆွဲခေါ်သွားနိုင်သည်မှာ၊ စတုထ္ထလက္ခဏာပြည်တွင်းစစ်ဟု ကျမ်းရှင်က သုံးသပ်ပြပါသည်။
EDITOR'S CHOICE , THE WAVES MAGAZINE 7/09.NOVEMBER.2009 မှ ထုတ်နုတ်ပါသည်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက Anonymous at 7:10 PM2comments
Answer of Previous Puzzle!
ကျနော်လည်း အရင် ရက်တွေက အလုပ်နဲနဲ များနေလို့ ပဠေဟိ ကို အဖြေ မညှိ ဖြစ်တာပါ။ လာလည်ပြီး ဖြေပေးသွားကြသော ကိုမာရေးသျှင်၊ Waing၊ ၀ါခေါင်မိုး၊ အေးမြနှင်းရည် နှင့်တကွ လာလည် ကြသော ညီအကို မောင်နှမအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ အဖြေ ပေးသွားကြသာသူ အားလုံး မှန်ကြပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျနော် သိထားတဲ့ အဖြေလေး တစ်ခုနဲ့ စဉ်းစားပုံကိုတော့ အချိုပေါ် သကာလေး လောင်းခွင့်ပြုပါ။
ကျနော်တို့ စတင် စဉ်းစားကြသည့်အခါ (အဖြေမှန်ရသွားသော ကောင်မလေး) မိမိ ခေါင်းပေါ်က သရဖူသည် မသိကိန်း တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ မိမိရှေ့တွင် ရွှေ သရဖူ နှစ်ခု ရှိနေသည်။
ဆိုကြပါစို့ ကျနော်တို့ ကိုယ် ကျနော်တို့ A ဖြစ်သည်ဟု ယူဆကြပါစို့။ ကျနော်တို့ ရှေ့ရှိ B နှင့် C တို့တွင် ရွှေသရဖူ အသီးသီး ရှိနေသည်။ B သည် C ၏ ဦးခေါင်းပေါ်ရှိ ရွှေသရဖူကို မြင်၍ လက်ထောင်ခြင်း လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အတူ C သည် B ၏ ဦးခေါင်းပေါ်ရှိ ရွှေသရဖူကို မြင်၍ လက်ထောင်ခြင်း လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအခါ ကျနော်တို့ ဦးခေါင်းပေါ်မှ သရဖူသည် ရွှေ သရဖူလား ၊ ငွေသရဖူလား . . . ကျနော်တို့ ဇဝေဇ၀ါ ။
ကျနော်တို့ B နေရာက ဖြစ်စေ C နေရာက ဖြစ်စေ ၀င်စဉ်းစားကြည့်သည့်အခါ ထို အတိုင်းပဲ ဇဝေဇ၀ါ အဖြေသာ ရလေသည်။
ဘုရင်ကြီးက အားလုံးကို တန်းတူ အခွင့်အရေး ပေးမည်ကလည်း အသေအချာ။ ကျနော်တို့ မည်ကဲသို့ စဉ်းစားမည်နည်း။ မိမိရှေ့မှ တယောက်ကို မေးရအောင်ကလည်း အားလုံးက အတူတူ ယှဉ်ပြိုင်နေကြခြင်းသာ။ မည်သူမျှ အဖြေက်ို ထုတ်ပြောရလောက်အောင် အ လိမ့်မည် မဟုတ် ။
ဟုတ်သည်ရှိ မဟုတ်သည်ရှိ ရမ်းသမ်းပြောရအောင် ကလည်း ဘုရင် ငြိုင်ပါက မိမိ အသက်ပါ အိုးစာကွဲဖို့ ရှိလေသည်။ သေခြာသော အဖြေရမှ ဖြစ်မည်။ သေခြာတာကတော့ မိမိ ပြိုင်ဘက် နှစ်ယောက်သည်လည်း သာမန် အမျိုးသမီးတို့ထက် သာလွန်သော အရည်အချင်း ရှိသူများသာ။ သူတို့ ဘာတွေ တွေးနေမလဲ ။ ဘယ်လိုတွေများ တွေးနေမှာလည်း . . . ခုထိတော့ အားလုံးက ငြိမ်ငြိမ် သက်သက်. . . သူတို့ မျက်လုံးကိုဖတ်သည့် အခါ သူတို့လည်း အဖြေကို ဇဝေဇ၀ါဖြင့် စဉ်းစားဆဲ ။
ဟုတ်ပြီ . . . ကျနော်တို့ တစ်မျိုး စဉ်းစား ကြည့်ရအောင်။ အထက်ပါ ပုံကိုပဲ ပြန် ကြည့်ပါ။
မိမိ ဦးခေါင်းပေါ်က သရဖူသည် ငွေဖြစ်သည် ဆိုပါစို့။
B သည် မိမိ(A)ဦးခေါင်းပေါ်မှ ငွေသရဖူနှင့် C ၏ ဦးခေါင်းပေါ်မှ ရွှေသရဖူ ကို မြင်ရမည်။ ထို့အတူ C သည်လည်း မိမိ(A)ဦးခေါင်းပေါ်မှ ငွေသရဖူနှင့် B ၏ ဦးခေါင်းပေါ်မှ ရွှေသရဖူ ကို မြင်ရမည်။
“ပဠေဟိ ၏ ဥပဒေသမှာ မိမိရှေ့ရှိ တစ်ဦးဦး၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦး စလုံး၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေ ရွှေသရဖူ မြင်ပါက ညာလက်ကို မြှောက်ထားရမည်။”
ထိုအခါ B နှင် C အဖို့ လွယ်ကူသွားမည်။
B နေရာမှ စဉ်းစားပါက သူ့ရှေ့တွင် ရွှေ သရဖူ တစ်ခု၊ ငွေ သရဖူ တစ်ခု။ C ကလည်း လက်ထောင်ထားသည်။ ထိုကြောင့် C မြင်ရသည်က လည်း ရွှေသရဖူ တစ်ခု ငွေ သရဖူ တစ်ခုသာ ဖြစ်မည်။ A ၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ငွေ သရဖူသာ ရှိသည်။ ထိုအခါ မိမိ (B)ခေါင်းပေါ်မှ သရဖူသည် ရွှေသရဖူ ဖြစ်သည်မှာ အသေအချာ။
C နေရာက ထပ်ပြီး ၀င်စဉ်းပါကလည်း ထို့အတူ အဖြေသာ ရမည်။
သို့သော် စက္ကန့်၃၀လောက် အထိ သူမတို့ ဇဝေဇ၀ါ သာ ရှိသေးသည်။ အထက်ပါ မိမိ (A) ၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ငွေသရဖူ ရှိနေခြင်းသာ မှန်ကန်ခဲ့ပါက သူမတို့ အဖို့ ထိုမျှလောက် စဉ်းစားနေစရာလိုသော ပုစ္ဆာ မဟုတ်။ သူမတို့ ၂ ဦးက အဖြေကို စောလျှင်စွာ ဖြေနှင့်ပြီး ဖြစ်မည်။ ဘုရင်ကြီးကလည်း အားလုံးကို တန်းတူ အခွင့်အရေး ပေးရာ ကျမည် မဟုတ်။ ထို့အတူ ပုစ္ဆာသည်လည်း လွယ်ကူနေပေလိမ့်မည်။
ကဲ . . . မိမိ (A) ၏ ဦးခေါင်းထက်တွင် ရွှေသရဖူ ရှိနေသည် ဆိုပြီး ထပ်မံ စဉ်းစားကြပါဦးစို့။
ထိုအခါ ပုစ္ဆာ သည် အထက်က စဉ်းစားသကဲ့သို့ မလွယ်လှပဲ အဖြေကို စဉ်းစား မရချေ။
ထို့ကြောင့် သူမတို့ နှေင့်နှေးနေခြင်းမှာ ဤအကြောင်းသာ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မိမိဦးခေါင်းပေါ်မှ သရဖူသည် ရွှေသရဖူ သာဖြစ်လေသည်။
ထို့နောက် သူမ ထောင်ထသော လက်ကို ပြန်ချ၍ မတ်တက်ရပ် လိုက်သည်။
ထို့နောက် မိမိဦးခေါင်းပေါ်မှ သရဖူသည် “ရွှေသရဖူ” ဖြစ်ပါသည် အရှင်မင်းကြီးဟု လျောက်ထားလိုက်ပါတော့သည်။
လေးစား ခင်မင်လျက် . . .
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 12:54 PM 1 comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် တာတူး (ဝါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက်, ပျော်စရာလေးတွေ
"ပျော်စရာ ပဠေဟိလေး တစ်ခု"
လာလည် ကြသော ညီ အကို မောင် နှမများ အတွက် အပျင်းပြေ ပဠေဟိ လေး တစ်ခု နဲ့ ဧည့် ခံ လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ဟိုးရှေးရှေးတုံးက ဘုရင်ကြီး တပါးဟာ တိုင်းပြည်တခုမှာ အုပ်စိုးသတဲ့ ။ အဲဒီ ဘုရင်က ပညာတတ် ဘုရင် ဖြစ်လေတော့ သူ့တိုင်းပြည်က ပြည်သူပြည်သားတွေကို ကျေးတော် ကျွန်တော် တွေလို့ အထင်အမြင် သေးသေး မထားပဲ သူက အဲဒီလူတွေရဲ့ ဦးဆောင်သူ တယောက်မျှသာ ဖြစ်တယ်လို့ သူ့စိတ်ထဲမှာ ခံယူတော်မူသတဲ့။ မင်းဘဏ္ဍာတော် ရဖို့ အခွန်အတုပ်တွေ နင်းကန် မကောက်ပဲ မျှတရုံ တော်သင့်ရုံသာ ကောက်၊ လယ်ယာ ကိုင်းကျွန်း စည်ပင်ပြန့်ပွားဖို့ တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ လူမှု့ရေး ၊ အစစ အရာရာ မျှတအောင် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင် ရွက်တော် မူတယ်တဲ့။ တိုင်းပြည်ကလည်း ဦးဆောင်သူ ဘုရင်က ကောင်းလေတော့ စည်စည်ပင်ပင် ဖွံ့ဖွံ့ဖြိုးဖြိုးပေါ့။ အမှိုက်သိမ်းတဲ့ လူက အစ ဆယ်လူလာ ခါးကြားညှပ်လို့၊ အိမ်ခြေ ယာခြေမဲ့ ဆိုတာကလည်း နတ္ထိ။ အသက်အရွယ်တွေကြီးရင့်မှ မနိုင်ဝန်တွေ လုပ်နေရတဲ့ အိုကြီး အိုမတွေလည်း မရှိ။ အလှူတွေ ပွဲလမ်းသဘင်တွေ ကြက်ပျံမကျနဲ့ မုဆိုးမတောင် ဘုရားတည်နိုင် လောက်အောင် ပြည့်ဝ စည်ပင်လို့ ပေါ့။
အဲဒီလိုနဲ့ တိုင်းပြည်ကြီးက စည်ပင်ဝပြောလာတော့ အရေးအရာတွေ လုပ်စရာတွေက များလာ သပေါ့။ တချို့ အရာတွေကျတော့ ဘုရင် ကိုယ်တော်တိုင် ပြုလုပ် အဆင်ပြေပေမယ့် တချို့ အရာတွေကျ အဆင်မပြေလှပေဘူးပေါ့။ အမျိုးသမီး ရေးရာတို့၊ မိခင်နဲ့ ခလေးတို့လို ကိစ္စတွေပေါ့လေ။ အဲဒါနဲ့ ဘုရင်ကြိးက သူ့အတွက် တိုင်းပြည်ထဲက အမျိုးသမီး တယောက်ယောက်ကို မိဖုရား မြှောက်ဖို့ အကြံ ဖြစ်သတဲ့။ သူ့ရဲ့ အကြံပေး မူးကြီး မတ်ကြီးတွေ ပရောဟိတ်ဆရာကြီးတွေနဲ့ ခေါင်းချင်ဆိုင် တိုင်ပင်သတဲ့။
ရုပ်ရည် ရူပကာ လှပယုံလေး ဆိုရင်လည်း သူ့တိုင်းပြည်ထဲ ဗြူတီပါလာ တွေသာ များလာမယ် တိုင်းပြည်က ဒီထက်စည်ပင်ဖို့ မိဖုရားရဲ့ အထောက်အကူ မရနိုင်ပေဘူးပေါ့။
အသံ သာတာလေး ရွေးမယ်ဆိုတော့လည်း သူ့တိုင်းပြည်ထဲ ကာရာအိုကေ ဆိုင်တွေသာ မိုးဥိးကျ မှိုတွေ ထသလိုသာ ဖြစ်လာမယ် တိုင်းပြည်က တိုးတက်မယ် မဟုတ်ပေဘူးပေါ့။
စာတတ်ပေတတ်တွေ ရွေးမယ် ကြံတော့လည်း ကြက်တူရွေးလို စာတွေ သင်ပြီး စာတွေပဲ တတ်တာတွေ ရွေးမိမှာလည်း စိုးရိမ်တော် မူပြန်တယ်တဲ့။
တော်ကြာ ပညာတော့ တတ်ပါရဲ့ မိဖုရား ဖြစ်လောက်တဲ့ ရုပ်ရည် မရှိပြန်ရင်လည်း အခြားတိုင်းပြည်တွေက ကဲ့ရဲ့ကြမှာ စိုးရိမ်တော် မူကြပြန်သတဲ့။
အဲဒါနဲ့ နောက်ဆုံးကျတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ်ထင်တာနဲ့ ဒီဘက်ခေတ်ဆို Miss Universe ရွေးသလိုပေါ့ အဆင်းလေးရော အချင်းလေးရော မျှတပြိး ပါအောင် ရွေးဖို့ လုပ်ကြသတဲ့။ တိုင်းပြည်ထဲမှာ ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်မကျသေးသော အပျိုဟူသမျှ လွပ်လပ်စွာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရသတဲ့။ တန်းတူ ညီမျှ အခွင့်အရေးပေါ့လေ။ ၀န်ကြီး သမီးမို့၊ စစ်ကဲကြီး သမီးမို့၊ ရွာစား သမီးမို့၊ လယ်သူမမို့၊ ကောက်စိုက်သမမို့၊ ဇီးသီးသည်မို့ ခွဲခြားထားတာတွေ မရှိ၊ စည်းမျဉ်းတွေက တန်းတူပေါ့။ အဲဒါနဲ့ လူတန်းစား အလွှာအသီးသီးက လုံမပျိုတွေနဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် မိဖုရား ရွေးချယ်ပွဲ အဆင့်ဆင့် ကျင်းပလာလိုက်တာ . . . . . . . . . နောက်ဆုံးကျတော့ စကာတင် ၃ ယောက်ပဲ ကျန်သတဲ့။
အဲဒါနဲ့ ဘုရင်ကြီးက အဲဒီ မိဖုရာလောင်း ၃ ဦးကို သူကိုယ်တော်တိုင် နောက်းဆုံး မေးခွန်း၂ခု မေးပြီး ရွေးချယ်တော် မူမယ်လို့ မိန့်တော်မူသတဲ့။
အဲဒီ နောက်ဆုံး မေးခွန်း မေးမယ့်နေ့ကျတော့ ဘုရင်ကြီးက လုံမပျို ၃ ယောက်ကို ဖိုခနောက်ဆိုင်ပုံ (၃ နားညီ တြိဂံ ပုံစံ) တစ်ဦးမျက်နှာ တစ်ဦး မြင်သာအောင် ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး
အသင် လုံမပျိုတို့ သင်တို့သည် ငါတို့ တိုင်းပြည်ထဲမှ အထူးချွန် အလိမ္မာဆုံး လုံမပျိုများ ဖြစ်ကြသည်။ ယခု အချိန်အထိ အသင်တို့ ၃ဦးစလုံးသည် မိဖုရား ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အရေး တန်းတူ ရှိကြသည်။ သို့သော် သင်တို့အထဲမှ အထူးချွန် အလိမ္မာဆုံးသောသူသာ မိဖုရား ဖြစ်ခွင့် ရှိသည်။ မိဖုရား ဖြစ်သူသည် ငါနှင့်အတူ တိုင်းပြည် အကျိုး ဦးစီး ဆောင်ရွက် တော်မူရမည်။ မိဖုရား မဖြစ်သူများကလည်း တိုင်းပြည် အကျိုးကို မိမိတို့ အစွမ်းရှိသမျှ ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြိုတင် မိန့်မှာ လိုပေသည်။ ယခု မေးခွန်းများ မမေးခင်
“ သင်တို့ မျက်နှာတွေကို ပ၀ါစဖြင့် ဘာမှ မမြင်ရအောင် စည်းထားမည်။ နောက် သင်တို့ ဦးခေါင်းတွေပေါ်မှာ ငါကိုယ်တော် သရဖူ တခုစီတင်ပေးမည်။ သင်တို့ ဦးခေါင်းပေါ်က သရဖူသည် ရွှေသရဖူ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မည်၊ ငွေသရဖူ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်။ သုံးဦး လုံး၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင် သရဖူ အသီးသီး တင်ပြီးပါက သင်တို့ မျက်လုံးကို စည်းထားသော ပ၀ါစများကို တပြိုင်နက် ဖြူတ်ချပေးလိုက်မည်။ ထိုအခါ သင်တို့အထဲမှ အခြား နှစ်ဦးကို အသင်တို့ ရှေ့တွင် မြင်ရမည်။ သင်တို့ ရှေ့ရှိ နှစ် ဦးထဲမှ တစ်ဦး၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေ ၊ နှစ်ဦး စလုံး၏ ဦးခေါင်းပေါ်တွင်ဖြစ်စေ ရွှေသရဖူ မြင်ပါက သင်တို့၏ ညာလက်ကို မြှောက်ထားရမည်။
သင်တို့ဦးခေါင်းပေါ်တွင် ရှိသော သရဖူသည် မည်သည့် သရဖူ ဖြစ်သည်ကို သင်တို့ မှန်းဆ သိရှိလိုက်လျှင်လိုက်ချင်း သင်၏ ထောင်ထသော လက်ကို ချရမည်။ ထို့နောက်
(၁) သင့်ဦးခေါင်းပေါ်တွင် မည်သည့် သရဖူ ရှိသည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောပြရမည်။
(၂) ထိုအဖြေကို မည်ကဲ့သို့ ရရှိလာသည်ကို လည်း ရှင်း ပြရမည်။ ”
ထိုကဲသို့ မိန့်တော် မူပြီးနောက် ဘုရင်ကြီးက သူ၏မင်းချင်းများကို လုံမပျို ၃ ယောက်စလုံး၏ မျက်နှာတွင် ပ၀ါများ စည်းစေပြီးနောက် သူကိုယ်တော်တိုင်ပင် ၃ ယောက်စလုံး၏ ဥိးခေါင်းထက်တွင် ရွှေသရဖူ တစ်ခုစီ တင်ပေး လိုက်သည်။
ထို့နောက် သူ၏် မင်းချင်းများကို လုံမပျိုများ မျက်နှာပေါ်မှ စည်းထားသော ပ၀ါများကို တပြိုင်နက်တည်း ဖြူတ်ချ ခိုင်းလိုက်သည်။
တခဏမျှ နေပြိးနောက် မိန်းမပျို ၃ ဦး စလုံး သူတို့၏ ညာလက်များကို မြှောက်လိုက်ကြသည် ။ နန်းတော် တစ်ခုလုံးကလည်း မိမိအသက်ရှူသံကို ပြန်ကြားရလောက်အောင် ရင်ခုန်စွာဖြင့် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်. . . ။ အချိန် အတော်ကြာမှ ( စက္ကန့်၃၀လောက် အကြာမှ ) သူတို့ ၃ ဥိးထဲမှ တစ်ဦးက သူမ၏် မြှောက်ထားသော လက်ကိုချလိုက်ပြိး သူမ ဦးခေါင်းထက်မှ သရဖူသည် . . . .
ဖြေဆိုလိုက်ပြိး သူမသည် ဘုရင်ကြီး၏ မိဖုရား ဖြစ်သွားကာ တိုင်းပြည်ကို သာယာဝပြော ပိုမိုစည်ပင်အောင် ကူညီ သွားသတဲ့ ကွယ် . . . .
ပုံပြင်လေး အဲ မှားလို့ ပဠေဟိလေးက နံပတ် (၁) နဲ့( ၂) ပါ။ အဲဒီ လုံမပျိုလေး အဖြေကို ဘယ်လိုရသွားသလဲ ဆိုတာ ကူညီ စဉ်းစားပေးကြပါ။
အပျော် လေး ပေါ့ ခင်ဗျာ. . .
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 9:01 PM7comments